Xayeysiinta Dijitaalka ah waxay u badan tahay inuu noqdo midka ugu sarreeya ee xayeysiinta warbaahinta sannadka 2016 sida laga soo xigtay comScore. Taasi waxay sidoo kale ka dhigeysaa bartilmaameed aan la diidi karin oo loogu talagalay khayaanada gujinta. Xaqiiqdii, sida ku xusan warbixin cusub oo ku saabsan khayaanada warshadaha xayeysiinta ee internetka, seddex meelood meel dhammaan kharashaadka ku baxa xayeysiinta ayaa lagu khasaarin doonaa khayaanada.
Shabakadaha Distil iyo Xafiiska Cinwaanka Isdhexgalka (IAB) waa sii daayay Tilmaamaha Daabacaha Dijitaalka ah ee Cabbirka iyo Yaraynta Bot Traffic, warbixin baareysa dhibaatada maanta khayaanada xayeysiiska dhijitaalka ah.
Dalbashada daahfurnaan - Haddii wakaaladdaada ama alaab-qeybiyeyaasha xayeysiinta aysan ku tusin karin meesha xayeysiin kasta